“Zava-Poana Miloko Volamena”: Artista An-Dalamben’i St. Petersburg Maneso Ireo Mpiasam-Panjakana Ambony Mandefa Ny Zanany Any Ampitan-Tsisintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2016 14:45 GMT
Ny Renirano Neva ao St. Petersburg. Sary: Roelof Foppen, Flickr.
Nanomboka nanangana ny asakantony tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ilay mpanakanto Rosiana iray izay tsy fantatra anarana fa antsoina amin'ny solon'anarana hoe Hioshi ary fantatra tamin'ny fampirantiana asakanto madinika eny an-dalamben'ny Saint Petersburg. Mampiseho manampahefana Rosiana maro apetraka ao anaty fitotoan-kena iray miloko volamena ny “Zava-Poana Lokom-Bolamena (Na, Mba Ento Ny Zanako)” mitrotro zazakely vao teraka ny iray tamin'izy ireo, miangavy ny tanora nahazo diplaoma iray mba hitondra ny zanany any ivelany miaraka aminy mba “tsy ho lehibe ao anatin'ny tontolon'ny lalànan'ny rainy”, araka an'i Hioshi.
Ilay asakanto, izay manana haavo 25 santimetatra ary vita amin'ny tanimanga, vy sy akirilina, efa roa andro izay no hita manamorona ny Reniranon'i Bolshaya Neva ao Saint Petersburg.
Ny fananganana ny “fitotoan-kena miloko volamena miaraka amin'ny manam-pahefana” hita ao Saint-Pétersbourg.
“Maniry ny handefa ny zanany any ivelany lavitra an’ i Rosia araka izay azo atao ireo manam-pahefana sy ny solombavambahoaka arakaraka ny fiovan'ny volavolan-dalàna sy ny didim-panjakana ,” hoy i Hioshi tamin'ny RuNet Echo. Ny asakanto, hoy izy, dia mitsikera ny fihatsarambelatsihin'ny manampahefana amin'ny fitiavan-tanindrazana sy tsy fitiavana Tandrefana. Milaza ilay mpanakanto eny an-dalambe fa nifidy ny fitotoan-kena miloko volamena izy satria mamaritra tsara ny fiainan'ny manampahefana Rosiana izany: “Eritrereto ny honahona na ny fasika mampilentika izay misintona anareo hidina – izay tsy manam-piafarana, ary raha vao mihetsika kely ianao dia vao mainka milentika lalindalina kokoa, miaraka amin'ireo manodidina anao. “
Mpiasa-panjakana ambony Rosiana maro no mandefa ny zanany mba hianatra any ivelany toa an'i Dmitry Peskov mpitondratenin'ny Kremlin, Sergey Zheleznyak solombavambahoakan'ny Rosia Tafaray, Vladimir Yakunin Filohan'ny Fitaterana an-dalamby Rosiana teo aloha, sy ny maro hafa izay manan-janaka mianatra any Andrefana amin'izao fotoana izao .
Ho setrin'ny volavolan-dalàna vao haingana izay mandrarà ny zanaky ny manampahefana mba tsy hianatra any ivelany no nahatonga ny famoronan'i Hioshi . “Mbola sarotra ho an'ny asakantoko ny hanova ny zava-misy eto Rosia, indrindra moa fa ny hampisy fiantraikany izany amin'ireo mpanao kolikoly, tia tanindrazana loatra, na mpivavaka – mihidy ao amin'ny efi-trano maizina izy ireo miaraka amin'i [mpanolotra amin'ny fahitalavi-panjakana sady mpanao propagandy Dmitry] Kiselyov sy i [depiote sady mpikatroka manohitra ny LGBTQ Vitaly] Milonov, mandrangitra ny tandrefana avy eo amin'ny toerana mampilamin-tsaina,” hoy i Hioshi. Te hampita hafatra amin'ny alàlan'ny zavakantoko aho “ho an'ireo izay mahita ny lainga sy ny fankahalana tsy mitombina amin'ny fandaharam-panjakana sy ho an'ireo manantena fifidianana mangarahara fatratra: aoka isika tsy hilefitra. Mbola misy ny fiainana mitsilopilopy kely eto; tsy irery ianao.”
Ahitana ny “Studio Rules of Composition” (2016), izay natokana ho an'ny fampialofana tsy mampahazo aina sy tsy takabidy ao Rosia, sy ny “TV Dinner” (2015) , izay manasongadina ny fianakaviana efatra misakafo sady mifantoka mijery ny fahitalavi-panjakana Fantsona Voalohany ny famoronan'i Hioshi lehibe indrindra.